Indlu yeLizwe elizolileyo
Indlu yelizwe ejikelezwe yizidiliya kunye neefama, apho unokunxibelelana ngokuzola, ukuthula, ingoma yeentaka, izilwanyana zasefama kunye nokucamngca nge-Andes Mountain Range.
Le ndlu enhle eyakhiwe yintsapho yethu itholakala kwi-1 km ukusuka kwidolophu yaseVista Flores, kwifama yeehektare ezingama-20, ejikelezwe yizidiliya. Isitayile seRustic, izinto ezibekekileyo, imigangatho yokhuni, ukuvuleka kunye nesilingi, iindawo eziphangaleleyo neziqaqambileyo. I-Terrace kunye negalari enembono yentaba
Iprojekthi ezalwa ngombono we-Ecological Rural Tourism, apho siya kuguqula indawo ngendlela yokuzimela kunye nentlonipho kunye noMama wethu womhlaba. Ubulula, ubushushu kunye nentuthuzelo yekhaya eliya kukwamkela ukuba ukonwabele ixesha lokuzola kunye nekhusi kude nengxolo kunye nesantya sezixeko. Ungazifumana iimveliso zethu zendalo apho kunye neebhaskithi eziphilayo ezivela kwindawo ekhoyo ngokucelwa.
Indlu okulala 3, 2 kumgangatho osezantsi (master lokulala nge-1 ibhedi kabini 1 ebhedini enye, yaye elinye lokulala kunye neebhedi 2 single) kwaye enye kumgangatho wokuqala Suite kunye iibhedi ezimbini olunye, kunye ukufikelela ithala elikhulu Ngokubhekiselele kwintaba nesidiliya. Ikhitshi enkulu kunye nenhle ixhotyiswe ngefriji, i-microwave, isitovu, izitya eziyimfuneko. Igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye nesalamander. kunye negalari entle nebanzi enembono yoluhlu lweentaba kwaye ijikelezwe yindalo. Steakhouse kunye ne-oven yodongwe. Ichibi elihle elakhiwe ngokusekelwe kwijometri engcwele apho unokuvuselela khona kwaye ujabulele ubumnandi bamanzi ngaphandle kokusetyenziswa kweekhemikhali ukuyigcina. Ukukhathalela impilo kunye nokusingqongileyo.
Indawo yokungena efama ziindlela zomhlaba, malunga neemitha ezingama-500 ukusuka kwindlela eya kwidolophu yaseVista Flores.
Indlu efumaneka kwi-1 km ukusuka kwidolophu yaseVista Flores, abayibiza ngokuba "yintliziyo" ye-Uco Valley. Iqulethe izidiliya, ii-wineries kunye neendawo zokutyela ezifana neLa Posada del Jamón, ivenkile yegrosari yaseLa Juntada, i-El Viejo Molino, iMeya yaseFuente,
Kufuphi neendawo zokuthengisa iiwayini, iiprojekthi zenkcubeko, imiyezo kunye neefama eziphilayo, ukukhwela ihashe ukuya kwiindawo zemilingo, ukukhwela intaba, imilambo kunye neentaba.
Indlu ye-Super Uco, i-winery ye-biodynamic. kunye nevenkile yokutyela kunye negadi eziphilayo.
Siya kufumaneka kuyo nayiphi na into efunekayo ngefowuni kwaye kwimeko yongxamiseko okanye imfuno yoncedo kunye noncedo kuya kubakho umntu othembekileyo ophethe indlu kwaye usinceda ngemisebenzi eyahlukeneyo.